New Kusvika Series
Tafura Yeshangu Yekutevedzera
boka redu hwagadzwa muna 2006, riri mu Chinese Port City ------ Ningbo. Kubva kwayo kutangwa chaitwa kuti kukura uye rokutengesa pamba Textiles. Tine kugadzirwa pachedu mutsetse yedu uye vashandi chekawo akasarudzei uye rongedza.
Mumakore bhizimisi chekambani vakaratidza chakanaka kukura muitiro, vane zvakanaka mukurumbira iri vatengi, kambani yagara mweya "vatengi rokutanga, basa rokutanga" chinangwa, simbisa musika kudiwa, tarisa vanotozozviziva ramangwana, sika kukosha nokuti makasitoma uye isu.
Chekambani huru zvigadzirwa vari maketeni, pamakusheni, magumbeze, mubhedha zvinogadzirwa nezvimwewo. Zvino isu tine utano payakavakirwa kubereka Healthy zvigadzirwa. The zvigadzirwa vave aivigirwa kunyika dzakawanda uye kumatunhu, uye yakasimbiswa refu pamwe ukama makasitoma zhinji. The kambani dzose vanoomerera kupa vatengi pamwe kukwezva zvinhu uye mabasa, zvakawanda yokuisvonaka kuhwina vatengi 'anofadza uye zvakanaka rokutengesa pamusika wavo.
The kambani anodavira kuti pamwe chichiitwa pakuvaka muchikwata chichiitwa kuvandudzika akaitwa, kuti rutsigiro vatengi rokusika ramangwana riri nani!
Cushion , Printing munotapira , Car Seat Cushion , Print Cushion , Baby Swaddle putira , Suede ,